पीएसएलः लाहोर ब्याटिङ गर्दै, अन्तिम खेलमा को–कोले पाए मौका? - Everest Dainik - News from Nepal
पीएसएलः लाहोर ब्याटिङ गर्दै, अन्तिम खेलमा को–कोले पाए मौका?
काठमाडौं, फागुन २७ । पाकिस्तान सुपर लिग (पीएसएल) अन्तर्गत आफ्नो अन्तिम खेलमा मुल्तान सुल्तान विरुद्धको खेलमा सन्दीप लामिछाने आवद्ध लाहोर कलन्दर्सले टस हारेर ब्याटिङमो निम्तो पाएको छ ।
खेल नेपाली समयअनुसार दिउँसो २ः४५ बजेदेखि पाकिस्तानको कराँचीमा शुरु हुँदैछ । प्लेअफमा पुग्न असफल भएका यी दुई टिमबीचको यो अन्तिम खेल हो । मुल्तान अंक तालिकाको छैटौ र लाहोर पाँचौ स्थानमा छ । अन्तिम खेलमा को—कोले पाए मौका? हेर्नुस्—
याे पनि पढ्नुस टी–१० क्रिकेट लिगः सन्दीपलाई दाेस्रो सफलता